2006 Ninja 650R vs Suzuki SV650 – Motorcycle USA | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (36817)
'01 1500 FI Drifter, အဘယ်သူမျှမမီးပွား - Kawasaki ဖိုရမ် (11276)
Bajaj Avenger 220: တစ်ဦးကဘက်စုံပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ကယ် Blo ... (9971)
MZ စမှတ်စုများ - Philadelphia တွင်မွငျးစီးစဝီကီ (9900)
ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ relay ကိုအမျိုးအစားများအပေါ်မှတ်စုများ (သတိပေးခြင်း: မှိုင်းခြင်းနှင့်ငြီးငွေ့စရာ ... (9069)
VP ပြိုင်ပွဲလောင်စာနောက်ဆုံးရသတင်းများ: VP UNLEADE မိတ်ဆက် ... (8725)
KTM ပြိုင်ပွဲဘလော့ (8336)
ဟွန်ဒါ Wave ကို 125 လက်စွဲပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန်စာအုပ်များပြန်လည်ပြုပြင် (7516)
Peugeot မြန်နှုန်း Fight2အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလက်စွဲစာအုပ်ပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန် ... (7493)
Kawasaki ZXR 750 - မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, သတင်း & Advi ... (7347)
Yamaha ထုတ်လုပ်မှု Tesseract ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်? RideA ... (6709)
bajaj Pulsar 150 ပုံစံ, ဆန်းစစ်ခြင်း, နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ ... (6457)
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (6071)
ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 (6044)
KTM Duke 125/200 RaceDynamics PowerTRONIC afte ရ ... (5594)
နေအိမ် → ဆူဇူကီး → 2006 ဆူဇူကီး SV650 vs Ninja 650R - မော်တော်ဆိုင်ကယ်ယူအက်စ်အေ
2006 ဆူဇူကီး SV650 vs Ninja 650R – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ယူအက်စ်အေ
19 Jun 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments အပေါ် 2006 ဆူဇူကီး SV650 vs Ninja 650R – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ယူအက်စ်အေ
2006 ဆူဇူကီး SV650 vs Ninja 650R
ဒါကြောင့်, on streets and racetracks around the country,aparade of riders insists on throwingaleg over more bike than they’re ready to handle. And you know what the sad part is? They’d probably have more fun riding the smaller bikes that they disdain so. (An aside: When I started racing my EX500, the novice racer pitting next to me was ridingaZX-9. After he’d high-sided himselfacouple of times, I suggested that maybe he’d want to tryasmaller bike for racing.
With this family relationship and some similar styling touches to what little of the 650’s engine you can see from outside the swoopy bodywork, some have assumed that the engine is merelyalarger version of the EX’s. ကောင်းစွာ, that assumption is dead wrong. The 649cc engine isathoroughly modern unit developed solely for this bike.
A long swingarm, thanks to the short engine length, will improve handling while still keepingarelatively short wheelbase of 55.3 လက်မ.
CAR Mania: Ferrari ပြိုင်ကား 333 SP
ပတ်ရစ်တတ်သော (လက်စွပ်, #2) သုံးသပ်ချက်များ - Koji ဆူဇူကီးတို့က, ဆွေးနွေးချက်, Bookclubs, lists
Suzuki Gs 850 ပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန်စာအုပ်များ
Aprilia Mana 850 Ducati Desmosedici GP11 ဆူဇူကီး AN 650 Ducati 60 ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic Brammo Enertia Bajaj Discover စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် ဟွန်ဒါ DN-01 ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 Moto Guzzi 1000 Daytona Injection သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto စက်ဘီး Kawasaki ER-6n စမတ် eScooter Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် ဆူဇူကီး Colleda CO ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype Ducati Diavel KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down
သင်္ဘော MV Agusta F4 1000 S က – Road Test & ဆန်းစစ်ခြင်း – ဆိုငျကယျသမားအွန်လိုင်း